Unganyorereiko kunyorera Illinois Hemp License application?
Maitiro ekunyorera kweHemp License muIllinois
Musi waApril 30, 2019 - Illinois yakaburitsa fomu rayo rekushandisa hemp. Unogona kuwana yako Illinois indasitiri hemp application mune iyi link pazasi. Isu tinofara kukubatsira kuti uwane nekukurumidza.
Dzvanya Kutanga Illinois Hemp Chikumbiro.
Illinois yakaita maindasitiri hemp application nyore kufamba, asi iyo nzira yese kubva mukushandiswa kuenda kumbeu kutengesa ndeyekuti isu tiri kubatsira sei mabhizinesi anoda kuwedzera mabasa avo ehem ku Illinois, inzwa wakasununguka kutipa foni yekukurukura zvinangwa zvebhizimusi rekambani yako mu CBD kana indasitiri hemp.
Industrial Hemp muIllinois Kuvhurwa kwe2019
Iwo Illinois hemp mutemo hauna kungopfuurwa chete, asi zvakare zvirevo zvakabudiswa, zvinoreva kuti ndiyo yakagadzirira mwaka wayo wekutanga kukura.
Nguva yekutaura yeruzhinji yemitemo mitsva paHemp yakapera basa muna Kukadzi 11, 2019, sekureva kwazvino kutsikisa kweDhipatimendi rekurima. Common Ground kuburitswa. Iyo mitemo inopedzwa uye Industrial hemp kunyorera marezenisi ekurima kana kunyoresa kunyatsogadzirisa hemp inotarisirwa chero zuva ikozvino.
Illinois ' Industrial hemp Act inoenda mukutanga kwegore rezvirimwa ra 2019. Nepo ivo vekutanga kugamuchira vangakohwe imwe yemabhenefiti, mumakore apfuura hemp inogona kuve yakajairika kuona pamwe nechibage uye soya mune mapurazi ehurumende.
Hemp ndeye cannabis - CBD Ruva rinotaridzika seruva reTHC
Tsanangudzo yeIndasitiri Hemp
Chikamu che5 cheiyo Industrial Hemp Act chinotsanangudza iyo Viwanda Hemp se:
"Industrial hemp" zvinoreva chirimwa Cannabis sativa L. uye chero chikamu cheiyo chirimwa, ingave ichikura kana kuti kwete, ine delta-9 tetrahydrocannabinol yevasungwa isingasvike 0.3 muzana pahuremu hwakaoma hwakarimwa pasi pezenisi rakapihwa pasi Mutemo uyu kana zvimwe zviripamutemo muNyika ino, uye zvinosanganisira chero yepakati kana yapera chigadzirwa chakagadzirwa kana chakatorwa mumaindasitiri hemp.
Ngatisunungure zvinoreva izvo.
cannabis sativa is hemp, asiwo…
iyo cannabis sativa haina inopfuura 0.3 muzana yakaoma uremu hweTHC, uye
iyo yakasimwa pasi pezinesi, kana neimwe nzira zviri pamutemo mudunhu reIllinois, uye
chero chero chigadzirwa chakagadzirwa kana chakatorwa kubva kuhemp
Ndine iyo mapoinzi mana?
Iyo mirawo inosanganisira iyi inotevera mitemo:
Hapana munhu anogona kukura hemp pasina rezinesi
Hapana munhu anogona kubata hemp pasina rezinesi
Mbeu dzese, mabwe uye kutakurwa dzinofanira kuve dzakasimbiswa pasi peAOSCA.
diki nzvimbo yehekita imwe yekare yekunze uye 500 sq.ft. kwekukura kwemukati
Chikumbiro chakazadzikiswa chinofanirwa kuendeswa kudunhu KUSati kwatanga kukura
Munguva pfupi yapfuura, iyo nzimbo yeI Illinois yakaburitsawo zvayo zvekushandisa hemp - iwo anotevera:
Izita nekero yomunyori
Rudzi rwebhizinesi kana sangano, rakadai senge Corporate, LLC,
kudyidzana, wega proprietor, nezvimwe .;
Bhizinesi zita uye kero, kana zvakasiyana kune izvo zvakaunzwa mukati
kupindura kuchikamu (a) (1);
Tsananguro yepamutemo yenzvimbo yenyika, kusanganisira Global Positioning
Sisitimu inorongedza, kuti ishandiswe kurima maindasitiri hemp;
Mepu yenzvimbo yepasi apo uyo ari kunyorera anoronga kukura maindasitiri
hemp, inoratidza iwo miganhu uye zviyero zveiyi nzvimbo inokura mukati
maeka kana kuti mativi mativi;
Zvinyorwa kunyatsoratidza nzvimbo yepasi ipurazi sezvakatsanangurwa muchikamu 1-60
yeCustoms Code Code; uye
Mari inoshanda ye $ 1,100.
sei kuwana hemp inokura rezinesi mu Illinois?
Kana rako bhizimusi remuchina rinoda rubatsiro neYunivhesiti Hemp License, ndapota fonera zvedu cannabis magweta.
Kana Pedzisa chat chat yavakagadzira pane ino webhusaiti. Tichave takabatana!
Hemp Kukura kana Kugadziriswa
Illinois 'Industrial Hemp Act inoda rezinesi kune chero kurima (kukura) iyo hemp, kana kugadzirisa (kugadzira) iyo hemp.
Kugadziriswa kweHemp Under Illinois Mutemo.
Chikamu chegumi cheI Illinois Industrial Hemp Act inopa izvo zvinodiwa kuti chikumbiro chekuwana rezinesi chinodiwa. Chaizvoizvo, zvinhu zvitatu chete zvinodikanwa pasi pechikamu 10 (b) chemutemo. inopa zvikamu zvitatu:
(1) zita nekero zveanonyorera;
(2) kurondedzerwa zviri pamutemo kwenzvimbo yenzvimbo, kusanganisira Global Positioning System inongedza, kuti ishandiswe kurima maindasitiri hemp; uye
(3) kana mutemo wemubatanidzwa uchida danho rekutsvagisa kurimwa kwemaindasitiri hemp, rondedzero yechinangwa chimwe kana zvimwe zvekutsvaga zvakarongwa nezvekurimwa kwemaindasitiri hemp iyo ingangosanganisira kudzidza kwekukura, kurima, kana kushambadzira kwemaindasitiri hemp; zvisinei, iyo donzo rechinangwa rinotsvaga harizombodzikiswa kumisa kutengesa kutengesa kwemaindasitiri hemp.
Kupfuurirazve, iyo Illinois Hemp Mutemo inoenderera mberi inoda mamwe matanho kubva kuvarimi veHemp. Vanofanira:
iva ne gore rimwe chete rekutarisa kwekurima basa
bvunzo yekusapfuura huwandu hunodiwa hweTHC
Mitemo yakagadzwa neIllinois Dhipatimendi rekurima kwezvemitengo, signage uye mafomu.
Kugadziriswa kweiyo Industrial Hemp
Kusiyana nevarimisi vehemp, vanogadzirisa hemp havatsvake rezinesi - asi kungonyoreswa chete.
Chikamu 10 (b-5) chinopa kuti:
Munhu haafanire kugadzirira hemp muHurumende ino pasina kunyoresa neDhipatimendi pafomu rakatarwa neDhipatimendi.
Sezvineiwo, kana uchinge wakura zviri pamutemo hemp - ingave ichibva kuI Illinois kana kwete - unogona kutanga kugadzirisa iyo hemp mune chero nhamba yezvinhu zvinobatsira - asi chete mushure mekuwana kunyoresa kwako nehurumende.
Mhedziso yeHemp Kuumbwa kana Kugadziriswa
Saka nepo zvichiratidzika kuti ivo chete vanokura ve hemp vanoda rezinesi, vanogadzirisa hemp muzvigadzirwa senge CBD kuisa pfungwa vachiri kuda kunyoresa.
Kana rako bhizimusi remuchina rinoda rubatsiro neYunivhesiti Hemp License, ndapota fonera zvedu cannabis magweta pa (309) 740-4033.
Sezvazvino zvichangoburwa patsva pane iri peji musi waFebruary 22, 2019, iyo Illinois Dhipatimendi rekurima harisati ratanga kutora manyorerwo. Fonera isu ikozvino kuti uve nechokwadi chekuti kana nguva yasvika - bhizinesi rako rinogona kuwana rezinesi yayo yekumaindasitiri hemp.